फादर्स डेको लागि सर्वश्रेष्ठ प्रविधी उपहारहरू ग्याजेट समाचार
फादर्स डे को लागी सबै भन्दा राम्रो geeky उपहार
ईडर एस्टेबान | | अमेजन, सामान्य
बुबाको दिन आउँदैछ। तसर्थ, तपाईं यो विशेष मिति को लागी उपहार खोज्दै हुनुहुन्छ। यो मितिमा केहि कम विशिष्ट उपहारहरू बनाउन प्रयास गर्न झन् झन सामान्य हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले तपाइँ प्राविधिक उपहार मा शर्त। यस अर्थमा छनौट व्यापक छ, त्यसैले सबै प्रकारका उपहारहरू यस अर्थमा गर्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई यस फिल्डमा विकल्पहरूको सूचीको साथमा छोडिदिन्छौं।
तेसैले यदि तपाईं उपहार फादरहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो फादर्स डे, तपाईलाई चासो दिन मन पराउने कुरा तपाईको लागि यो सजिलो हुनेछ। राम्रो विकल्पहरूसँग यस समयमा विशिष्ट उपहारहरूबाट टाढा हुन।
1 दलाल पेपरजहाइट
2 Amazon फायर टिभी स्टिक
3 जियाओमी मेरो बैंड 3
4 ओलम्पस पेन E-PL8
5 WD मेरो पासपोर्ट - T TB पोर्टेबल हार्ड ड्राइव
6 सैमसंग ग्यालेक्सी S10
7 अमेजन इको
8 GoPro HERO7 व्हाइट
9 Omars बाह्य ब्याट्री 10000mAh
किन्डल पेपरहाइट सम्भवतः अमेरिकी फर्मको ईरेडरहरूको दायरा भित्रै सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलहरू छन्। त्यो दायरा बजारमा १० बर्ष भैरहेको छ, जहाँ तिनीहरू उत्तम विक्रेताको रूपमा राखिएको छ। गत वर्ष यो पेपरहाइट नविकरण गरिएको थियो केहि नयाँ सुविधाहरूको साथ। किनकि यो अब वाटरप्रूफ छ, थप भण्डारण ठाउँको अतिरिक्त। त्यसोभए तपाईसँग थप पुस्तकहरू छन्। निस्सन्देह, यो फादर्स डेको लागि उत्तम उपहार, ती अभिभावकहरूको लागि जो विशेष रूपमा छुट्टीमा पढ्न मन पराउँछन्।
हामी यो किन्डल पेपरहाइट ए मा पाउन सक्छौं आज १२। .129,99eयुरो। यसलाई भाग्न नदेऊ!
किन्डल पेपरहाइट -...यहाँ किन्नुहोस् »/]
Amazon फायर टिभी स्टिक
धन्यवाद अमेजन फायर टिभी स्टिकले यो गर्दछ साधारण टिभीमा एउटा टेलिभिजनलाई स्मार्ट टिभीमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन। किनकि तपाईले यससँग मात्र उपकरण जडान गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले, तपाईंसँग स्ट्रिमिंग सामग्रीको एक विशाल रकममा पहुँच हुनेछ। किनभने त्यहाँ धेरै अन्यहरूमा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो वा यूट्यूब जस्ता अनुप्रयोगहरू छन्। यसैले यस उपकरणसँग टेलिभिजनमा तपाईंको मनपर्ने श्रृंखलाहरू हेर्न सम्भव छ। थप रूपमा, यसले खेलहरूको ठूलो संख्यामा पहुँच पनि प्रदान गर्दछ। तपाईंको टिभीलाई स्मार्ट टिभी बनाउनको लागि राम्रो विकल्प।
यो अमेजन फायर टिभी स्टिक हुन सक्छ ।। .39,99eयुरो को लागी अस्थायी रूपमा किन्नुहोस् (यसको सामान्य मूल्य। ..59,99 युरो हो)। त्यसैले तपाईं यसलाई राम्रो छुटको साथ यस फादर्स डेको लागि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
फायर टिभी स्टिक | आधारभूत ...यहाँ खरीद गर्नुहोस् »/]
जियाओमी मेरो बैंड 3
अधिक एथलेटिक अभिभावकहरूको लागि, शाओमी मी ब्यान्ड3जस्तो गतिविधि ब्रसेलेट विचार गर्न राम्रो विकल्प हो। पहिले नै उसको तेस्रो पुस्ता। यो तपाईंको स्मार्टफोनसँग सिंक हुन्छ र खेलहरू गर्न सजिलो बनाउँदछ। यसले चरणहरू गणना गर्दछ, जलाइएको क्यालोरीहरू गणना गर्दछ, मुटुको दरको ट्र्याक राख्दछ, कार्यहरूको साथै सन्देशहरू, कलहरू, क्यालेन्डर अनुस्मारकहरू वा निन्द्रा नियन्त्रण जस्ता कार्यहरूको अतिरिक्त। संक्षेप मा, धेरै पूरा। यसमा एक ब्याट्री छ जुन २० दिनको दायरामा वचन दिन्छ।
यो सियाओमी ब्रेसलेट हुन सक्छ २०.११ युरोको अस्थायी रूपमा खरीद गर्नुहोस् (सामान्य मूल्य २। .29,99eयुरो हो)। त्यसो भए यसमा यस राम्रो छुटलाई नबिर्सनुहोस्।
शाओमी मी बैन्ड--...यहाँ किन्नुहोस् »/]
ओलम्पस पेन E-PL8
यो क्यामेरा १ MP MP हो। यसमा ध्यान आकर्षित गर्ने पहिलो पक्षहरू मध्ये एक यसको डिजाइन हो, यसमा छालाको प्रयोग गर्न स्पष्ट रेट्रो प्रेरणाको साथ धन्यवाद। एक कॉम्प्याक्ट क्यामेरा, जुन यसलाई सँधै आफैंमा आफूसँग बोक्न सजिलो बनाउँछ। यसले तपाईंलाई पूर्ण HD रिजोलुसनको साथ भिडियो रेकर्ड गर्न पनि अनुमति दिन्छ सबै समयमा। योसँग-इन्चको स्क्रीन छ जहाँबाट हामीले केहि चीजहरू कन्फिगर गर्नका साथै सबै कुरा पनि हेर्न सक्छौं। योसँग वाइफाइ पनि छ, जसले यसलाई अन्य उपकरणहरूसँग सरल तरीकाले समक्रमण गर्न अनुमति दिन्छ।
बुबा दिवस को लागी यो क्यामेरा अमेजनमा 449 XNUMXeयूरोको मूल्यमा किन्न सकिन्छ। एक क्वालिटी क्यामेरा, जुन राम्रो विकल्प हो यदि तपाईंको बुबाले फोटोग्राफी मनपराउनुहुन्छ भने।
ओलम्पस पेन E-PL8 -...यहाँ किन्नुहोस् »/]
WD मेरो पासपोर्ट - T TB पोर्टेबल हार्ड ड्राइव
धेरै घरहरूमा हराउन नसकिने उत्पादन पोर्टेबल हार्ड ड्राइभ हो। महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, फोटोहरू वा फाइलहरू सुरक्षित राख्नको लागि एक उत्तम तरिका। चाहे यो काम बाट हो वा व्यक्तिगत, यस उपकरणमा ब्याकअप लिन राम्रो लाग्दछ। यो हार्ड ड्राइवको क्षमता4TB छ। त्यसोभए तपाईंसँग यसमा पर्याप्त ठाउँ हुनेछ। थपको रूपमा, तपाई प्रत्येकको स्वादमा निर्भरता धेरै फरक र colors्गीन रंगहरुको बिच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि उल्लेख गरिनु पर्छ कि यो पश्चिमी डिजिटल हार्ड ड्राइव हार्डवेयर ईन्क्रिप्शनको साथ पासवर्ड सुरक्षाको साथ आउँदछ।
तपाईं अस्थायी रूपमा एक मा हुनुहुन्छ 112,80 .XNUMXeयुरो, जब यसको सामान्य मूल्य १ 159,99। .XNUMXeयुरो हो। तसर्थ, यो विचार गर्न राम्रो अवसर हो। यसलाई भाग्न नदेऊ!
WD मेरो पासपोर्ट, डिस्क ...यहाँ खरीद गर्नुहोस् »/]
सैमसंग ग्यालेक्सी S10
ठूलो बजेटमा भएकाहरूका लागि, सामसु'sको भर्खरको उच्च-अन्त विचार गर्नु राम्रो विकल्प हो। सामसु्गले हामीलाई यस ग्यालेक्सी S10 सँग छोड्छ, जसको विशिष्टताहरु यहाँ देख्न सकिन्छ, फेब्रुअरीमा। एक उच्च-अन्त जसको लागि उनीहरूले आफ्नो डिजाइन पूर्ण रूपमा नवीकरण गरेका छन्। थप रूपमा, यो स्पष्ट रूपमा यस फोनमा फोटोग्राफी गर्न प्रतिबद्ध छ। यो उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ एक महान गुणको स्मार्टफोन हो र यो कुनै श doubt्का बिना पिताको दिन को लागी एक शानदार उपहार हो।
यो विगत शुक्रवार देखि स्पेन मा किन्न सकिन्छ। उच्च अन्त्यमा रुचि राख्नेहरूको लागि, यसलाई 909 ०। यूरोमा किन्न सकिन्छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 -...यहाँ किन्नुहोस् »/]
अमेजनसँग स्पिकरहरूको फराकिलो दायरा छ। यद्यपि उनीहरूले हामी सबैलाई अमेजन इको शोको प्रक्षेपणसँग चकित पारे, जुन बिल्ट-इन स्क्रिनको साथ आइपुग्ने ब्रान्डको पहिलो हो। यो त्यस्तो चीज हो जुन यस स्पिकरको प्रयोगलाई उल्लेखनीय तरीकाले बढाउन अनुमति दिन्छ, यो पहिले नै यसको विश्लेषण मा देखिएको छ। एउटा राम्रो विकल्प जुनसँग तपाईंको घरलाई अझ चलाख र केही कार्यहरू थोरै सरल बनाउँदछ, यसमा अलेक्साको उपस्थितिलाई धन्यवाद।
यो ब्रान्ड स्पिकर हुन सक्छ आज २२। .229,99eयुरोमा किन्नुहोस्। यस फादर्स डेको लागि बिभिन्न उपहार।
इको शो (दोस्रो ...यहाँ किन्नुहोस् »/]
GoPro HERO7 व्हाइट
फादर्स डेका लागि अर्को राम्रो विकल्प, ती बढि एथलेटिक अभिभावकहरूको लागि, यो खेलकुद कार्य क्यामेरा हो। यसको लागि धन्यबाद, तपाईं बाइक मार्फत वा सर्फिंग गरेर गर्नुहुने सबै खेलहरूको उत्कृष्ट छविहरू पाउन सक्षम हुनुहुनेछ। यस क्यामेरामा वाटरप्रूफ हुने फाइदा छ, जसले पक्कै पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै विकल्पहरू दिन्छ। यो क्यामेरा १० MP छ, भिडियोलाई 10p मा रेकर्ड गर्न अनुमति दिनुको साथ। यो हीरो दायराको हो, यद्यपि यो गत वर्षको मोडेल भन्दा फरक छ।
योaबाट किन्न सकिन्छ अस्थायी रूपमा १ 198eयूरो, किनकि यसको सामान्य मूल्य २१। .219,99eयुरो हो।
GoPro HERO7 व्हाइट -...यहाँ किन्नुहोस् »/]
Omars बाह्य ब्याट्री 10000mAh
हामी 10.000 mAh क्षमताको बाह्य ब्याट्रीको साथ सूची समाप्त गर्दछौं। एक राम्रो विकल्प सँधै ध्यानमा राख्नुपर्दा, फोनबाट जहिले पनि चार्ज गर्न सक्षम हुन तपाई घरबाट टाढा हुनुहुन्छ। विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जो कामको लागि आफ्नो फोन धेरै प्रयोग गर्नुपर्दछ यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यसमा दुई प्रकारका आगतहरू छन्, जसले यसलाई स्मार्टफोनका सबै प्रकारकासँग उपयुक्त बनाउँदछ। एक राम्रो बाह्य एक राम्रो बाह्य ब्याट्री।
किनकि यो उपलब्ध छ अमेजनमा केवल १..14,99 यूरोका लागि।
कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।यहाँ खरीद गर्नुहोस् »/]
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » अमेजन » फादर्स डे को लागी सबै भन्दा राम्रो geeky उपहार
वेब (WWW) मनाइरहेको छ: यो it० बर्षको हुन्छ
मलाई कसरी फेसबुकमा ब्लक गरिएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने?